ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လုံခြုံရေး Facebook! | Martech Zone
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 30, 2011 Douglas Karr
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်၎င်းသည်မကြာခဏပေါ်လာသည့်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များကိုဆက်လက်မြှင့်တင်နေသည်။ သူတို့ရဲ့အချက်အလက်များအရ, တိုးတက်မှုအလုပ်လုပ်နှင့်ပြissuesနာများကိုလျှော့ချနေကြသည်။ ၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင် login ၆၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုရပ်တန့်ခြင်းအပါအဝင်ကြီးမားသောကြိုးစားမှုဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များသော်လည်းရိုးရှင်းမဟုတ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကသူတို့၏လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များသည်မည်မျှရှုပ်ထွေးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်၊ Facebook လုံခြုံရေးအချက်အလက်.
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအလွန်အလေးအနက်ထားသောသူများ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ယူသည်။ ဒေတာဘေ့စ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းကဲ့သို့သောနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတိုင်း၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံပြီးသေချာစေရန် ၂၄/၇ အလုပ်လုပ်သည်။
iPhone နှင့် Android Social App ကိုအသုံးပြုခြင်း